Ahlu Sunna iyo Shabaab oo dagaal ku dhexmaray Galgaduud | raascasayrmedia.com
← Beesha Cali Saleebaan ee W/Maraykanka oo Baaq ka soo Saaray Xiisada R/Casayr State iyo tan Galgala
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in xukuumadda iyo baarlamaanku uu waqti ka dhammaanyo bisha Ogoosto →
May 12, 2011 · 3:18 pm
Ahlu Sunna iyo Shabaab oo dagaal ku dhexmaray Galgaduud
Dagaal qasaaro gaystay oo u dhaxeeya Ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca iyo kuwa Xarakada Al Shabaab ayaa maanta waxaa uu ka dhacya deegaano ka tiran gobolka Galgaduud.
Dagaaladaani oo la’isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan islamarkaana u dhaxeeyay ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca iyo Xarakada Al Shabaab ayaa maanta waxaa uu ka dhacay Deegaanada Dhagaxyaale iyo Yaayaale oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Dagaalkaani oo socday muddo ayaa waxaa uu bilaawday kadib markii ciidamo ka tirsan Al Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ay Ciidamada Ahlu Sunna ku lahaaeen deegaanka Dhaxaxyaale.
Inta la’ogyahay dagaalkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 4-ruux oo ahaa dhinacyadii dagaalamayay halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen, waxaana dagaalkaasi uu ku fiday deegaanka Yaayaale ee duleedka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo ah afhayeenka Ciidamada Xarakada Al Shabaab oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa uu guulo ka sheegtay dagaalkaasi, isagoo intaasi raaciyay in Ahlu Sunna ay u carareen degmada Guriceel.
Cabdi Baashi Aadan Diiriye oo ah gudoomiye ku xigeenka Ahlu Sunna Waljamaaca ee degmada Guriceel oo lahadlay Idaacadda Shabelle ayaa waxaa uu sheegay in Al Shabaab weerarkoodu uu ahaa mid duulaan ah, waxaana uu hoosta ka xariiqay in weerarkaasi ay fashiliyeen haatana Ahlu Sunn ay gacanta ku hayso deegaanadii maanta lagu dagaalamay.
Marka laga soo tagao guulaha ay kala sheeganayaan labadaasi dhinac ayaa hadana waxaa jirin wararka ka madaxbanaan labadaasi dhinac oo sheegay guulahaasi wallow wararku qaar ay sheegayaan in deegaanadaasi laga dareemayo xaalaad kacsnaan ah oo ay walaac ka muujiyeen dadkii rayidka ahaa ee ku suganaa deegaanada Dhagaxyaale iyo Yaayaale ee gobolka Galgaduud.